🍒FastPay cha cha - Official Site, Ndebanye aha, Bonuses 2021
FastPay Casino >FastPay Online Casino - Ebe kacha mma na nkwụnye ụgwọ ngwa ngwa n'otu ebe
FastPay Online Casino - Ebe kacha mma na nkwụnye ụgwọ ngwa ngwa n'otu ebe
FastPay Official weebụsaịtị Review
dịgasị iche iche nke igwe oghere na FastPay
Bonuses na nkwado na-enye maka ndị ahịa FastPay
Casino cha cha FastPay bụ ọrụ ịgba chaa chaa na-eto eto nke Dama N.V. malitere. Ọtụtụ casinos a ma ama na-arụ ọrụ n'okpuru njikwa ya. FastPay nwere ikikere mba ofesi nke Curacao Gaming Commission nyere. A na-enyocha cha cha n'ịntanetị mgbe nile maka ime ihe n'eziokwu ma na-eji nanị igwe oghere nwere ikikere. Ihe oru ngo a na-elekwasị anya na ọrụ dị mma na ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa.
Isi saịtị nke cha cha dị na mpaghara mpaghara COM. Mba ụfọdụ chọrọ ọrụ ịgba chaa chaa mba ofesi iji nweta ikikere mpaghara, ma ọ bụghị na-egbochi saịtị ha. Iji zere ihe mgbochi ndị a, enwere enyo FastPay - nke a bụ saịtị ọzọ nke na-adịghị iche na isi na arụmọrụ na interface. Naanị ihe dị iche bụ ngalaba.
FastPay saịtị ka na agba ọchịchịrị. Naanị bọtịnụ na egwuregwu nwere nhazi na-enwu gbaa. Ejiri taabụ na-anọchi anya nchịkọta nhọrọ elu:
"Gbasara Anyị" - nwere ozi gbasara cha cha;
"Nkwado" - na - enye gị ohere ịhapụ arịrịọ na ọrụ nkwado;
"Nkwụ ụgwọ" - sistemụ ịkwụ ụgwọ a kwadoro, nkwụnye ego na oke iwepụ gosipụtara ebe a;
"Nkwado" - a gosipụtara ngalaba ahụ ozi banyere nkwalite ugbu a, ego, ọnọdụ maka nnata ha;
"Asọmpi" - cha cha na-enwekarị asọmpi n'etiti ndị ahịa ya, na ngalaba ị nwere ike ịchọta ozi gbasara asọmpi ugbu a na n'ọdịnihu.
N'elu enwere ụdị nbanye, bọtịnụ imeghe windo ndebanye aha. N’elu aka nri elu enwere bọtịnụ maka ịhọrọ asụsụ. A sụgharịrị interface ahụ n'asụsụ Russian, Bekee, German, Ukrainian, Polish, Finnish, Spanish, Czech, Japanese, Malay, French, Norwegian, Turkish.
Ihe ọkọlọtọ ozi nwere akụkụ dị mkpa nke isi peeji. A na-ebipụta onyinye nkwado, ozi bụ isi banyere ọrụ cha cha.
N'okpuru ọkọlọtọ enwere njikọ na isi ngalaba nke cha cha, enwere oghere egwuregwu na igwe oghere na egwuregwu ndị ọzọ. Enwere ike ịnwale oghere niile na ọnọdụ n'efu - ọ nweghị ndebanye aha achọrọ.
Na ala nke webụsaịtị cha cha FastPay enwere menu menu, njikọ na ngalaba nwere ozi iwu. Ọ bụ iwu na ị ga-amụ iwu na ọnọdụ nke egwuregwu tupu ị debanye aha.
Mgbe ị gara na saịtị ahụ site na ekwentị mkpanaaka, interface na-akpaghị aka na nha ihuenyo. Nke a na - enye gị ohere igwu egwuregwu ịgba chaa chaa kachasị amasị gị site na mbadamba, ama na oke nkasi obi.
FastPay online cha cha na-enye 24/7 nkwado ndị ahịa. I nwere ike ịrịọ maka enyemaka n'oge ọ bụla n'ụbọchị. Nkwado teknụzụ na-enyere aka na ndebanye aha, imeju akaụntụ, wdg.
cha cha enyela ọtụtụ ọwa nkwukọrịta:
nkata n'ịntanetị - akpọ site na bọtịnụ menu kwekọrọ, ọ dị na akuku aka nri nke saịtị;
tiketi - ị nwere ike ịmepụta tiketi site na bọtịnụ"Nkwado" nke menu kachasị elu;
e-mail - ị kwesịrị iziga mkpesa naanị na kọntaktị egosiri na ebe nrụọrụ weebụ cha cha.
Tupu ịkpọtụrụ ọrụ nkwado, a na-atụ aro ka ị gaa ngalaba Ajụjụ. Enwere azịza dị njikere maka ajụjụ ndị a ma ama ebe a.
Ndị ọbịa na saịtị ahụ mara ọkwa ikuku dị mma nke ebe nrụọrụ gọọmentị na ebe dị mma nke isi ọrụ ya. Ọkọlọtọ mara mma na-edochi ibe ha, na-egosi ndị ọbịa na ndị otu edenyere na FastPay Casino klọb ozi niile dị mkpa, yana ịkpalite mmasị na ihe na-eme n'ime mgbidi ya mebere.
Ibe mbu nwere bọtịnụ ndebanye aha, bọtịnụ nbanye na taabụ menu. The ezi uche grouped interface na-eme ka ọ dị mfe ọbụna beginners ka ịnyagharịa. Ndị na-agba chaa chaa si mba dị iche iche ga-enwe ahụ iru ala na ibe ya, n'ihi na edegharịala ya maka ọtụtụ asụsụ dị iche iche:
Style nke saịtị gọọmentị Fastray bụ ihe dị iche iche site na agba dị mma, ya mere ọ na-atọ ya ụtọ. Enweghị ozi na-enweghị isi na usoro mara mma na-enye gị ohere ịgbanarị nsogbu ọ bụla ụbọchị ọ bụla, na-adaba n'ime ọtụtụ egwuregwu ịgba chaa chaa.
Azụmahịa ego na FastPay cha cha
plọ cha cha ahụ na-enye ọtụtụ ụzọ ịkwụnye ma wepu mmeri. FastPay na - aru ​​oru di iche iche di iche-iche di iche-iche di iche-iche di iche iche di iche-iche di iche iche, karie onodu ego - EUR, NOK, CAD, AUD, NZD, PLN, JPY, ZAR, USD, BTC, BCH, ETH, DOGE, LTC. Ọhụrụ ọ bụla ahịa ga-họrọ isi ego nke akaụntụ na oge nke aha. Ọ bụrụ na-etinye ego ndị ọzọ na ego ọzọ, mgbe ahụ a ga-eme ntụgharị akpaka.
Imirikiti nkwụnye ego na FastPay na-akwụ ụgwọ na-enweghị ọrụ, belụsọ obere akpa elektrọnị WebMoney. N'ihe karịrị 80% nke ikpe, a na-etinye ego na akaụntụ ahụ ozugbo - ozugbo ị kwụrụ ụgwọ onye ọkpụkpọ ahụ nwere ike itinye nzo.
hodszọ nke ịdebe akaụntụ egwuregwu:
kaadị bank - Visa, Maestro, Mastercard;
akwukwo ego - EcoVaucher wdg.
Na mkpokọta, cha cha na-enye nhọrọ nkwụnye ego 18. A na-ahụ oke maka imegharị ihe site na iguzosi ike n'ihe, ha na-enye gị ohere igwu egwu ọbụlagodi obere ego - 10 USD, 10 EUR, 0.05 BCH, 4400 DOGE, 0.025 ETH, 0.001 BTC, 0.02 LTC, 102 NOK, 15 CAD, 15 AUD, 16 NZD, PLN 45, JPY 1285, ZAR 175.
Ndepụta nke usoro ịkwụ ụgwọ maka ịwepụ bụ nke yiri nhọrọ nkwụnye ego. A na-akwụ ụgwọ n'ime awa 12-72, dabere na ego na usoro ịkwụ ụgwọ. Oke opekata mpe ihe ewepụ bụ okpukpu abụọ karịa ego nkwụnye ego.
Iji wepu ego na akaụntụ ahụ, ọ ga-adị mkpa ka ị mezuo ọnọdụ ego niile (ma ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ahụ na-esonye na nkwalite ahụ), gafee usoro nyocha.
Ndepụta ịgba chaa chaa FastPay na-enye ihe karịrị puku puku abụọ egwuregwu maka uto ọ bụla. Saịtị ahụ nwere oghere na roulettes site na ihe karịrị ndị na-eweta 30:
PlaySon, Relax, Igrosoft, Microgaming, wdg.
plọ cha cha ahụ pụrụ iche na oghere ọhụrụ - enweghị igwe ochie nwere eserese ndị mgbe ochie. Ndepụta a nwere igwe oghere na 3 na 5 reels, 5 ma ọ bụ karịa ịkwụ ụgwọ. Oghere ọ bụla nwere isiokwu nke ya, nke a raara nye imewe, ihe egwuregwu, ụda olu.
Akụkụ"Zụrụ Njirimara" na"Bitcoin, ETH, LTC" kwesịrị nlebara anya pụrụ iche. Akụkụ nke mbụ nwere igwe oghere ebe ị nwere ike zụta agba agba, ngalaba nke abụọ na-eweta ohere mpere na ntanye n'ụdị cryptocurrency. Offọdụ igwe na FastPay nwere jackpots.
plọ cha cha na-enye ọtụtụ roulettes - American, Norwegian, auto roulette, wdg. Otu egwuregwu a bụ nke ndị na-eweta Evolution na-anọchi anya ya. Ihe ọkpụkpọ nwere ike ịhọrọ tebụl kwesịrị ekwesị dabere na mmasị na oke onwe gị.
Ihe omume cha cha cha cha na-anọchi anya onyinye ndị a:
Bongwọ maka ndị ahịa ọhụrụ. Ha na-otoro na nke mbụ na nke abụọ ego na FastPay. Na nkwụnye ego mbụ, onye ọkpụkpọ ahụ na-enweta ego ego na nkwụnye ego n'efu, na nke abụọ - naanị ego ego. Ọnụ ego ego nke ego ahụ kpebiri site na nha nke nkwụnye ego. Oke kachasị nke ego izizi bụ 865 NOR, 100 USD/EUR, 0,5 BCH, 1.9 LTC, 44000 DOGE, 127 CAD, 130 AUD, 0.01 BTC, 1511 CAR, 0.25 ETH, 10670 JPY, 374 PLN ... Ogo nke nke abụọ bụ oge 2 dị obere. Nwere ike iji onyinye nnabata naanị otu oge.
usoro iguzosi ike n'ihe. Mejupụtara ọkwa - iji nweta nke ọ bụla ịchọrọ ịnakọta isi ọnọdụ. Ha na-akwụ ụgwọ maka ịkụ nzọ na igwe oghere na egwuregwu ndị ọzọ. Usoro iguzosi ike n'ihe na-emetụta ọnụọgụ ego dịnụ. Maka iru ọkwa ọhụrụ, onye ọkpụkpọ ahụ na - enweta 15 ka 500 na - enweghị atụ.
Fastpay bụ ọrụ na-adọrọ mmasị nke ndị egwuregwu ịgba chaa chaa niile kwesịrị ịtụle. Casinolọ cha cha ahụ na-enye ihe niile ịchọrọ maka oge na-atọ ụtọ, nmikpu n'ime ụwa nke ịgba chaa chaa. Ndị na-egwu egwu na-atụ anya ihe egwuregwu ịgba chaa chaa dị elu, ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa, webụsaịtị dị mma, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke daashi yana mmemme iguzosi ike n'ihe bara uru. Nanị ọnọdụ bụ na ọ bụ naanị ndị okenye nwere ike ịdebanye aha na saịtị ahụ.